Zavamaniry PSA Oksizena sy zavamaniry nitroka | Unité Separation Air - Fitaovana mpamokatra oksizenina
FITAOVANA FISARAHANA ANARANA
Tombony vokatra 1: Compressor Air Rotary mandeha ho azy. 2 ： fanjifana herinaratra tena ambany. 3 ： Ny fitsimbinana rano toy ny rivotra compressor dia rivotra. 4: 100% tsanganana fananganana vy tsy misy fangarony isaky ny fenitra ASME. 5 ： Oxygène madio madio ho an'ny fampiasana ara-pitsaboana / hopitaly. 6 ： kinova mitaingina Skid (Tsy ilaina ny fototra) 7 ： Manomboka haingana ary atsahatra ny fotoana. 8 ： Mameno ôksizenina amin'ny varingarina amin'ny alàlan'ny paompy oksizenina ranoka Application Fields Oksizena, azota, argon ary entona tsy fahita hafa novokarina ...
Tombontsoa azo avy amin'ny vokatra 1. Fametrahana sy fikojakojana tsotra noho ny famolavolana sy ny fananganana modular. 2. Rafitra mandeha ho azy ho an'ny asa tsotra sy azo antoka. 3. Azo antoka ny fananana entona indostrialy madio madio. 4. Antoka amin'ny fisian'ny vokatra amin'ny dingana ranoka hotehirizina ampiasaina mandritra ny asa fikojakojana. 5.Fihinana angovo ambany. 6.Fandefasana fotoana fohy. Application Fields Oksizena, azota, argon ary entona tsy fahita hafa novokarin'ny sampana fisarahana rivotra ...
Tombontsoa momba ny vokatra Manamboatra zavamaniry oksizenina izahay ho an'ny famenoana varingarina miaraka amina fitaovana sy singa tsara indrindra. Manamboatra ny zavamaniry ho an'ny mpanjifa sy ny fepetra eo an-toerana izahay. Misongadina eo amin'ny tsenan'ny entona indostrialy izahay manolotra ny fampifangaroana tsara indrindra ny vidiny sy ny fahombiazan'ny rafitray. Noho izy mandeha ho azy tanteraka, ny zavamaniry dia afaka mihazakazaka tsy misy mpiambina ary afaka manao troubleshooting diagnostika lavitra koa. Ny famolavolana Precision dia mampitombo ny fahombiazany ary mampihena ny fanjifana herinaratra amin'izay ...
Tombontsoa momba ny vokatra Fantatra amin'ny fahaizany miavaka amin'ny injeniera amin'ny famolavolana zavamaniry oksizenina ranoka izay mifototra amin'ny teknolojia fanodinana cryogenika. Ny famolavolana marina dia mahatonga ny rafitry ny entona indostrialy azo antoka sy mandaitra ary miteraka vidiny ambany amin'ny asa. Vita miaraka amina fitaovana sy singa avo lenta, maharitra maharitra ela ny zavamaniry ôksizena ranonay mitaky fikojakojana farany ambany. Ho an'ny fanarahanay ny fepetra fifehezana kalitao henjana, h ...
Tombontsoa azo avy amin'ny vokatra 1. Fametrahana sy fikojakojana tsotra noho ny famolavolana sy ny fananganana modular. 2. Rafitra mandeha ho azy ho an'ny asa tsotra sy azo antoka. 3. Azo antoka ny fananana entona indostrialy madio madio. 4. Antoka amin'ny fisian'ny vokatra amin'ny dingana ranoka hotehirizina ampiasaina mandritra ny asa fikojakojana. 5.Fihinana angovo ambany. 6.Fandefasana fotoana fohy. Application Fields Oksizena, azota, argon ary entona tsy fahita hafa novokarin'ny fisarahana amin'ny rivotra ...
Tombontsoa azo amin'ny vokatra 1: Ny fitsipiky ny famolavolana an'ity zavamaniry ity dia ny miantoka ny fiarovana, ny fitsitsiana angovo ary ny fiasa mora foana. Ny teknolojia no mitarika toerana eto amin'izao tontolo izao. A: Mila famokarana rano be dia be ny mpividy, koa manome ny fizotran'ny fanodinana rivotra mahery setra izahay mba hamonjy ny fampiasam-bola sy ny fanjifana angovo. B: Mampiasa compresseur rivotra azo ampiasaina izahay ary alaim-panahy avo lenta. dingana fanitarana mba hitsimbinana ny fanjifana herinaratra. 2: Izy io dia mandray fanaraha-maso DCS ...
Tombontsoa momba ny vokatra Raisinay fomba isan-karazany fonosana mifanaraka amin'ny takiana manokana. Ny kitapo fonosina sy boaty hazo dia matetika ampiasaina amin'ny tanjona tsy misy rano, vovoka ary porofo tsy ampoizina, miantoka ny fitaovam-piasana rehetra mijanona amin'ny toerana lavorary aorian'ny fiterahana. Mikasika ny lojika, manana trano fitobiana lehibe sy wharf tsy miankina 800 taonina ny orinasa. Afaka mandefa kargô mahery 500 taonina mivantana mivantana amin'ny alàlan'ny lakandrano mankany amin'ny seranan-tsambon'i Shanghai. Manana ...
Famoahana famaritana (Nm³ / h) fanjifana gazy mahomby (Nm³ / h) rafitra fanadiovana rivotra ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Manamboatra sy manondrana zavamaniry oksizena mandeha ho azy sy azota izahay zavamaniry ho an'ny famenoana varingarina miaraka amin'ny distillatio cryogenic farany ...
Famoahana famaritana (Nm³ / h) fanjifana gazy mahomby (Nm³ / h) rafitra fanadiovana rivotra ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Oksizena dia entona tsy azo avela hanohanana ny fiainana amin'ny tany, manokana ao amin'ny hopitaly, ny oxygen oxygen dia mitana andraikitra lehibe ...
Famoahana famaritana (Nm³ / h) fanjifana gazy mahomby (Nm³ / h) rafitra fanadiovana rivotra ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Manamboatra zavamaniry oksizenina PSA izahay amin'ny alàlan'ny PSA farany ( Teknolojia Swing Adsorption). Ny maha-zavamaniry PSA oksizenina lehibe indrindra ...
Famoahana famaritana (Nm³ / h) fanjifana gazy mahomby (Nm³ / h) rafitra fanadiovana rivotra ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 1: Indostrian'ny taratasy sy pulp ho an'ny famotsiana Oxy ary delignification 2: Indostria fitaratra ho an'ny fampiroboroboana ny lafaoro 3: industrie metalurgique ...
Famoahana famaritana (Nm³ / h) fanjifana entona mahomby (Nm³ / h) rafitra fanadiovana rivotra caliber ORN-5A 5 0.76 KJ-1 DN25 DN15 ORN-10A 10 1.73 KJ-2 DN25 DN15 ORN-20A 20 3.5 KJ-6 DN40 DN15 ORN-30A 30 5.3 KJ-6 DN40 DN25 ORN-40A 40 7 KJ-10 DN50 DN25 ORN-50A 50 8.6 KJ-10 DN50 DN25 ORN-60A 60 10.4 KJ-12 DN50 DN32 ORN-80A 80 13.7 KJ-20 DN65 DN40 ORN-100A 100 17.5 ...